Deep Black-RELOADED (PC Game )Full - Software Guide
Home / Game PC / Deep Black-RELOADED (PC Game )Full
Deep Black-RELOADED (PC Game )Full Reviewed by Ko Lin on 10:23:00 AM Rating: 5
Deep Black-RELOADED (PC Game )Full
Ko Lin 10:23:00 AM Game PC
PC Game တွေကို တောင်းဆိုထားကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ဂိမ်းကောင်းကောင်းလေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဖိုက်ဆိုဒ် (792 MB ) ပဲ ရှိတာကြောင့်Install ပြုလုပ် ရတာလည်းလွယ်ကူပြီး ဆော့ကစားရတာလည်း အရမ်းမိုက်တယ်ဗျာ။ လက်ရှိ လင်း ဆော့နေတဲ့ ဂိမ်းလေးမို့ အက်ရှင်ဂိမ်း တစ်ကိုယ့်တော် သူရဲ့ကောင်း အပိုက်အခိုက် ဂိမ်းလေးမို့ အောက်မှာ ဒေါင်းယူပြီး ဆော့ကစားနိုင်ပါပြီး။
Deep Black merupakan game petualangan yang sangat seru yang mana anda harus menyelesaikan setiap misi-misi penting anda dalam setiap pertempuran yang sangat mematikan, dulunya game ini dipublikasikan dan dimainkan untuk PS3 (Play Station 3) dan kini anda dapat memainkan game war ini di PC/komputer kesayangan anda. Graphic game ini sangat jernih dan benar-benar puas, jika anda mau game ini langsung saja download disini !
CPU:Intel Pentium D @ 2.8 GHz or Higher
HDD Space:6GB Free